I Ideapad Z510 Lenovo - 15-intshi laptop phakathi intengo ingxenye, okuyinto ibekwe njengesibonelo "sokuzilibazisa nsuku zonke", "mobile ukuzijabulisa centre." Inani zedivayisi ngempela umuzwa emnandi futhi ngokwesilinganiso ruble 30,000 (kusuka 20 000 kuya ku-40 000 kuya ku-ukucushwa). Ake sibone ukuthi ngabe imodeli muhle eqinisweni, njengoba elithenjiswe abakhangisi.
Ukubukeka: ukugqiba a ultrabook
Ultrabooks ngempumelelo ukunqoba emuva izikhundla nezinye izinhlobo laptops ngo-2011. Khanyisa futhi mncane, stylish - abayikho lidumile kubasebenzisi shazi. Yiqiniso, enamandla amageyimu esiteshini at 1.1-1.8 kg akuyona efanele, kodwa isiqondiso jikelele abaklami baye bazama ukugcina ekuklanyweni Lenovo Ideapad Z510. Futhi baphumelela.
Yebo, imodeli ihlukile, "ngokuvumelana ': sikebhe ukujiya ifinyelela 27 mm ngaphandle izinyawo, kodwa kubonakala ngempela nenhle ngesikhathi esifanayo, into efana incwadi isikhundla avaliwe ngenxa design imvelo onqenqemeni. Isisindo "incwajana" kuyinto 2.2 kg - hhayi okuningi, kodwa isikhwama ubhaka nakanjani kuthintwe futhi intombazane iyashesha ukuthinteka, futhi zonke kungaba nzima.
Design kungenziwa ngokuthi olungokoqobo matt ebusweni umzimba akusho ukuqoqa izibazi iminwe nezinye izinto, kodwa hhayi okumangalisayo imininingwane umbukwane - ngokuvamile ishiya okuvelayo nezimnandi idivayisi ezinhle.
A amazwi ambalwa mayelana enhlanganweni: squeaks futhi akukho backlash, kodwa endaweni yomzimba kancane bend isikrini, bese lapho sicindezelwe kubangela ukuphazamiseka kokulinganisela isithombe ukuthi abanye abanikazi ungathandi futhi abangele negative ukubuyekezwa. Lenovo le Ideapad Z510 hola ngokuqinile "ezine" umklamo nasekubulaleni izinga.
Google? Isikrini kanye nokusebenza umsindo
Imodeli itholakala ezinguqulweni ezahlukene, kukhona ongaphakeme ngaphezulu ongakhetha izindleko isinqumo 1366x768, kukhona ezibizayo ne HD Full, 1920x1080. TN-bit-matrix obuhlanekezela umbala ukukhiqizwa kanye has yokugqama. Mat enamathela ikuvumela ukuba kahle usebenza laptop kanye uma libalele.
Kodwa umsindo Lenovo Ideapad Z510 yaba yinhle ngempela: izikhulumi ezivela JBL ku ikhwalithi ifaniswe ngezipika engabizi kubiza kuze ruble 2000. Kuyinjabulo: imishini ezengeziwe ukulondolozwa kungenziwa.
Manje kufika ezithakazelisayo kakhulu ingxenye - ukugcwalisa. Lokhu laptop Lenovo iza Intel ezisekelwe oyisizukulwane sesine Haswell, eyenziwe HM 22 inqubo ubuchwepheshe, - I3 Core, i5 noma I7, esinikela ukusebenza eyanele ngezinhloso eziningi. I-RAM 4, 6 noma 8 GB; inani hard drive - 500 GB noma okungu-1 TB, kwezinye ukucupha, kukhona onobuhle SSD-isilondolozi. Kodwa okubaluleke kakhulu ngokuba "umdlalo" imodeli - khona a ihluzo ngokuqhubekayo le-NVIDIA le GeForce le 740m GT (2 GB): nokwenza kwayo kwanele ukugijima imidlalo zakamuva at izilungiselelo ophansi.
Awu, ne izici ukuzijabulisa we laptop zonke ukuze ubuke i-movie futhi ulalele umculo induduzo, futhi udlale ku umkhiqizo omusha - nazo zonke imisebenzi laptop Ungasingatha ngaphandle kwezinkinga.
Lula ukusetshenziswa: interface, ikhibhodi, iphedi
Notebook ifakwe ezintathu USB ezijwayelekile: 2 port version 3.0 1 port version 2.0 - ukusilela ezinengqondo, okuvumela umsebenzisi ukunikeza zokusebenza ukhululekile ngaphandle koxhumano ngokweqile kwemisebenzi ezingadingekile. Ngivumeleni ngichazele ukuthi USB 3.0 ishesha izikhathi 10 kuka 2.0, futhi, ngaphezu kwalokho, lezi izimbobo zingadla kudivayisi ngenxa amandla anda wamanje (900 ma kuqhathaniswa 500mA), ukuze kuthi lapho ukusebenza ngemoto zangaphandle Umehluko obonakala khulu, futhi kungenzeka ekumangaleleni, bathi, smartphone lapho uxhumeke laptop, futhi, ngeke kube engadingekile. Ngesikhathi esifanayo, kuyoba okwanele ukuze ubudala USB 2.0 flash drive noma i-bluetooth-igundane ne umamukeli.
isiqophi okukhiphayo ezimbili: ejwayelekile futhi kakade-HDMI ikuyo yonke indawo futhi VGA yisikhathi. Futhi okwamanje neze isethi ephelele redundant, ngoba laptop kuyaqabukela isetshenziselwe kuphela imidlalo, futhi ukusebenza noma ukufunda imisebenzi ye-VGA ukuphuma ngezikhathi ezithile kuyadingeka - ngokwesibonelo, isethulo.
RJ-45 Isixhumi inikeza ulwazi inethiwekhi 100 Mbit / s. Ukuba khona kwawo cishe akakubangeli izinkinga ... Awu, ngaphandle ukuthi omunye: kunganjani Gigabit?
isifundi sekhadi esingu esakhelwe ngaphakathi akusho ifa eguquguqukayo kanye nekhono ukufunda ezimbili nezakhiwo memory card: i-SD kanye MMC. Nokho, iningi khamera ukuthi kuyoba okwanele, kodwa kukhona adaptha microSD.
DVD-ROM drive etholakalayo, ufunde-BluRay amadiski baye ukuqopha umsebenzi - konke njengoba kufanele kube, asikhali ngalutho.
Kuhlanganiswe yomsindo for headphones nemakrofoni.
Iphedi kuyinto avamile, ngokuvamile itholakala ku yesimanje notebook onobuhle: uyabukeka touch, multitouch futhi isenzo ukwesekwa.
Ikhibhodi ye-isiqhingi uhlobo elula: travel encane ukhiye bangase ukuthayipha esiningi umbhalo, futhi ehlukile pad ezinombolo kuthokozise abantu abavame ukusebenza ngezinombolo. Ukutholakala incike ethize okukhanyisa iphethini, kunqunywa isithonjana nalutho ukhiye.
ukuzijabulisa Hambayo? impilo yebhethri
Yebo, Lenovo Ideapad Z510 nakanjani esifanelana kwencazelo "ukuzijabulisa phakathi nendawo", kodwa akukho ukuhamba inhlanhla: amahora ama-4 at ukukhanya umthwalo (ukufunda izincwadi, ngokuphuma singena ezingosini ze-inthanethi) kanye amahora 1-1.5 iphezulu (e imidlalo yesimanje) ezithinta umphumela we-umcabango akakwazi ngokuthi.
Nokho, uwuchaze isimiso owaziwa, singasho lokhu: "Ukusebenza, ukuzimela, intengo - ukukhetha 2 aphume 3". ukusebenza Esanele + intengo ongaphakeme = ukuzimela nesizotha.
Izimpikiswano "ngoba" Izimpikiswano "KWABANTU"
+ Ihluzo leyehlukene ikhadi
+ Design Nice
+ Umsindo Ovelele
- ukuzimela nesizotha
- akukho usekelo Gigabit Ethernet
Model Lenovo Kwatholakala ngempela ezithakazelisayo nangokulinganisela, nasembonini emakethe ncamashi Ideapad Z510 uthatha, futhi mhlawumbe wokukhipha ngisho nezinye Lenovo laptops, amanani awo uhla efanayo.
Njengoba ubona, izinzuzo namanje aminingi ukudlula minuses. Xazulula umthengi.